ISBEDDELKA (DEMODICOSIS) EE LO'DA: CALAAMADAHA IYO DAAWEYNTA, KA HORTAGGA - XOOLAHA
Sidee iyo waxa loo daaweynayo qolofta lo'da
Ma aha oo kaliya calaamadaha bilowga ah, laakiin sidoo kale lo'du waxay la kulantay cudurada lo'da. Mid ka mid ah cudurrada caadiga ah waa demodicosis, ama, sidoo kale waxaa loogu yeeraa dadka caadiga ah, isnadaamis. Laga soo bilaabo maqaalkan waxaad ka baran doontaa jirooyinka, ilaha iyo qaababka caabuqa xayawaanka, astaamaha cudurkan, hababka cudurka dabiiciga ah iyo daaweynta.
Demodecosis, ama isnadaamis, waa cudurka endoparasitic. Wakiilkeeduna waa Demotex caarada, taas oo saameeysa timaha timaha iyo qanjidhada qanjirada ee lo'da. Xajmiga buurnimadu ma dhaafsiiso 0.3 mm, jidhkeedu waa dixir, oo u qaybsan caloosha iyo cefalothorax. Goobta cefalothorax waxaa ka jira baaritaanka luteerka.
Tikidhadu waxay leedahay dhumuc yar oo saddex qeybood leh. Tilmaame-dhigashada shilintaas waa in ay ku nool yihiin deegaanada dhowr kun oo qof. Dumarka Demodex waxay dhigaan ukumo ka soo baxa dirxiga ee 5-6 maalmood. Isbedelka isbedelka oo dhan laga bilaabo ukunta ilaa dhaamka wuxuu qaadanayaa 25 ilaa 30 maalmood.
Cudurku wuxuu inta badan saameeyaa lo'da iyo eyda, laakiin waxaa jira xaalado marka jirku uu ku dhaco bisadaha iyo doofaarrada. Caabuqa wuxuu dhacaa iyada oo lala xiriirayo qof jiran, iyada oo loo marayo waxyaabaha beerta ama qalabka beeraha.
Waa muhiim! Demodecosis waxay yareeysaa wax soo saarka, kobcidda iyo kor u qaadida nidaamka difaaca ee xayawaanka, taas oo ka dhalatay in lo'da ay noqoto mid aan ka difaacayn cudurrada kale.
Sidaa darteed, cudurku si dhakhso ah ayuu u faafaa, sidaa daraadeed, si looga hortago faafidda cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in uu si taxadar leh uga shaqeeyo xayawaanka, si joogto ah u baaro lo'da, iyo marka la aqoonsanayo qof jirran, waa in isla markiiba laga soocaa lo'da. Marka lagu daro, ka dib marka la shaqeynayo xayawaanka, beeralayuhu waa inuu nadiifiyaa dharka uu ka shaqeeyay.
Sidee ayuu u egyahay iyo halka uu jirka u muuqdo
Cudurka cudurku wuxuu isu muujiyaa madaxa, laabta, dhabarka iyo garbaha. Tigadu waxay ku gashaa timo timo, iyada oo ay u jajabiso unugyada epithelial ee timaha xididka timaha, labadaba gudaha iyo dibedda.
Ka akhri cudurrada kale ee lo'da ee ay sababaan dulin: cysticercosis, hypodermatosis, dictyocaulosis, teliasiasis, anaplasmosis iyo babesiosis.
Tani waxay sabab u tahay soo-gaadhistaan, timaha aan dib loo soo celin karin. Cudurka qanjidhada ee madaxa ku yaala waxaa weheliya geeddi-socodka necrotic, taas oo horseedi karta is-dulqaad. Khatarta ayaa ah dhalinyaro da'doodu tahay 3 bilood ama ka weyn. Xilliga ugu wanaagsan ee foosha ee caarada demodex waa guga-xagaaga.
Astaamaha Diyariga Nafaqada waa:
joogitaanka maqaarka ee tubercles, dhexroorka kaas oo aan ka badnayn 10 mm;
timo lumay goobta xayawaanka;
muuqaalka kore ee walxaha cad-cad ee meeshiisa ah ee riixaya tubercles;
joogitaanka qaababka isugeynta timaha ee timaha leh waxyaabo daboolan;
cuncunka iyo guduudasho ee lo'da ayaa maqan.
Ma taqaanaa? Dareemaha urka ee lo'da ayaa daciif ah marka loo eego xayawaanka kale ee badan, inkastoo taasi qaansarradu ay daadinayaan dhulka daaqada ka hor inta aysan bilaabin cunista cawska. Waxay diidi doonaan inay cunaan, raadiyaan, tusaale ahaan, Bacriminta cusub.
Kaliya khabiir ayaa awood u leh inuu sameeyo baaritaan sax ah. Sidaa darteed, marka calaamadaha lagu ogaado baaritaanka xiga, waa inaad la xiriirtaa dhakhtarkaaga. Marka la ogaado qanjirrada maqaarka ee sifeynta ah, baaritaanka mikroscopic-ka waxaa ka mid ah: haddii ay jirto xuubka nodule, waxaa la saaraa cirbadaha, loo wareejiyo muraayad waxaana lagu baari karaa mikroskoob.
Haddii aysan jirin wax xannibaad ah, ka dibna qaado muunad ka mid ah waxyaabaha ku jira tuber-bareerka isla markaana si la mid ah u baara baaritaanka microscope. Haddii ay dhacdo in baaritaanada kiliinikada aysan xaqiijinin dododicosis, meelaha ku yaalo meelaha ugu badan ee shilinta, timaha waxaa laga soo baxayaa 1.5-2 mitir murabac. arag Dusha sare ee nadiifinta timaha, 2 dhibcood oo saliid ah ayaa loo adeegsadaa, ka dibna waxay qaybta qaybta maqaarka ku qoynayaan waxayna isticmaalaan dhinaca cirridka ee maqaarka si ay u tuujiyaan shilinta. Tirada iyo timaha soo baxa waxaa lagu baari doonaa iyada oo la isticmaalayo mikroskoobo.
Sida loo daaweeyo cudurka isnadaamiska ee lo'da
Daweynta cudurka isnadaamisku waxay noqon kartaa hababka caanka ah iyo diyaarinta xoolaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la xusuusto in dhakhtarka xoolaha kaliya uu sameyn karo ogaanshaha saxda ah iyo daaweyn.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in la bilaabo daaweynta kaliya ka dib marka la xaqiijiyo ogaanshaha cudurka, iyo kiiskaba daaweyntu waa shakhsi ahaaneed, kaas oo tixgelinaya da'da, caafimaadka jidhka iyo xaddiga maqaarka.
Dawooyinka ka hortagga uur-qaadida
Daaweynta duufaanikada ee lo'da isticmaalkeeda:
Dikrezil 0.75% emulsion ama suspension ayaa la isticmaalaa, 2-4 litir oo ah dareeraha acaricidal ayaa loo isticmaalaa xayawaan (mugga dareeraha waxay ku xiran tahay da'da lo'da). Xalka ujeedada waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xayawaan. Moobeyshaha waxaa lagu sameeyaa qol gaar ah ama qubeys, halkaas oo ay ku jirto taangigga tuubada. Daaweynta waxaa la sameeyaa 1 mar 6da subaxnimo, ka hor intaadan xayawaanka ku kaxeynin daaqa, ama galabtii, ka dib markaad nasato. Koorsada daaweyntu waa xilli ciyaareed firfircoon ee shilinta;
Waaq loo isticmaalo sida cirbadeynta halbowlaha ah. Qiyaasta: 1 ml 50 kg culeyska jirka. Xayawaanka miisaankiisu ka badan yahay 500 kg, cirbadda ayaa loo qaybin karaa 2 cirbadood;
Sevin Sevinum 1. Cayrinta, oo ka kooban 0.75-1% qaybta firfircoon ee firfircoon, ayaa loo isticmaalaa daaweynta dibadda ee weylaha da'doodu tahay 3 bilood iyo dadka waaweyn. Joojinta 0.75-0.85% waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo godadka ilaa 3 bilood iyo lo'da caanaha. Isticmaalka daroogada ee lagu buufin karo hal qof waa 1-3 litir. Waxqabadka waxaa la sameeyaa subaxa wiiggii mar toddobaadkii oo dhan inta lagu jiro xilliga fasaxa dhaadheer oo dhan;
Acrodex loo isticmaalo daaweynta aerosol ee lo'da. Koorsada daaweynta waa 4 daweyn oo leh mudo ah 5-7 maalmood, iyadoon loo eegin xilliga xiga. Hal aerosol ayaa ku filan 5-8 madax.
Iyada oo la dagaallamayo isnadaamiska, beeraley badani waxay u adeegsadeen qaabab daaweyneed oo caan ah. Marka hore, xayawaanka waa in si fiican loo maydho, iyo jilicsanaanta qolofta, kaas oo la sameeyay on maqaarka ay saameeyeen, maqaarka maqaarka leh biyo saabuun leh oo isku dhafan leh kiilofin.
Ka dib 24 saacadood ka dib, lo'da waxaa lagu dhaqi karaa xal iyada oo ku saleysan alkalka ash. Daaweynta noocan oo kale ah waxay noqon doontaa mid ku-ool ah oo ku-oolka ah daaweynta habboon.
Goobidda qalabka iyo qalabka
Ha iloobin xaqiiqada ah in caarada Demodex ay si gooni ah ugu noolaan karto lo'da, sidaas darteed waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa habka qolka iyo paddock, kaas oo ku jira xayawaan. Maalin kasta, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo alaabta qashinka ee lo'da, si fiican u dhaqdo qufac iyo cabitaanada isticmaalaya jeermi-dilaha, ka dibna ku shub biyo karkaraya.
Waa muhiim! Tikidhada ku dul noolaanshaha jidhka lo'da kuma keento bini-aadanka dadka.
Haddii ay lagama maarmaan tahay, dhagta ayaa sidoo kale lagu dhaqaa antiseptic. Beeraley ah oo sidoo kale noqon kara gudbiye xayawaan ah, ka dib marka uu xayawaanku taabto, waa inuu gacmihiisa ku dhaqaa saabuunta lidka bakteeriyada.
Xakameyntu waa cudur u dhaco si gaar ah xaaladaha qaarkood. Waa ku filan in qolka lagu hayo xayawaanka lagu nadiifiyo - iyo suurtogalnimada cudurku inuu hoos u dhaco.
Si looga hortago dhacdada cudurka wuxuu sidoo kale ka caawin doonaa tallaabooyinka soo socda:
waxay u baahan yihiin inay kormeeraan lo'daha dhowaan yimid ee ku saabsan mawduuca dareenka. Waxay ka fiicantahay in ay ku hayaan karantiilka waqti go'an (ka goosta inta kale). Dhamaadka gooni-goosashada, xubnaha cusub ee lo'da waxaa lagu daaweeyaa xal fareeb ah oo la yiraahdo cypermethrin;
Horraanta May (ka dib markii kulaylka ka dib) lo'da waxaa lagu baarayaa joogitaanka dulin. Haddii ay jiraan bukaanno, waxay kala soocaan inta ka hartay waxaana lagu daaweeyaa acaricides. Dhismayaasha, qalabka iyo dharka lala xiriirayo shakhsiyaadka cudurka qaba ayaa la nadiifiyaa ka dib marka la isticmaalo;
Si calaamadda demodhigu ay u adagtahay in lagu weeraro wakiilada lo'da, waa in la xoojiyaa xajinta xayawaanka. Inta lagu jiro xilliga jiilaalka, beeralayda qaarkood waxay ku daraan soodhersi rooti ah si ay u quudiyaan, taas oo cudurku uusan u dulqaadan karin, laakiin kaliya xoolaha ayaa go'aamin kara qiyaasta. Waxaa jira irbado qaas ah oo Ivomek ah oo ka hortagaya inay saxaradu ku dhacdo cudurka lo'da. Laakiin ka dib isticmaalka, hilibka xayawaanku ma fiicna dhawr bilood.
Haddii aad soo koobayso farsamooyinka aasaasiga ah ee u ogolaanaya ka hortagga isnadaamiska ee lo'da, ka dibna waxaa jira dhawr xeer oo keliya: nadaafadda xayawaanka iyo dhismaha, kormeer joogta ah oo cusub iyo inta hartay ee bukaanka iyo ilaalinta difaaca xayawaanka.
Ma taqaanaa? Maalmihii hore, Slavs waxay rumaysnaayeen in ay suuragal tahay in la bakhtiiyo dabka ay sababtay shaqo joojin la adeegsanayo caanaha lo'da madow.
Cudurrada ku jira lo'da waa cudur aan fiicnayn oo waxyeelo weyn u geysan kara beeraha. Si looga hortago cudurkan, waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah loo baaro xayawaanka, iyo marka calaamadaha ugu horreeya ay muuqdaan, isla markiiba la xariir dhakhaatiir xoolaha ah oo ka gaabiya shakhsiyaadka jiran. Si looga hortago horumarinta cudurka wuxuu ka hortagi karaa joogtada ah.